Atahorana ho lany tamingana ny hazo maitsoririnina hitsaboana homamiadana any Nepal · Global Voices teny Malagasy
Hazo lehibe miisa 500 sisa no any an'ala
Voadika ny 25 Marsa 2020 4:50 GMT
Vakio amin'ny teny Italiano, Français, Español, русский, čeština , 日本語, 한국어, English
Kirihitra Taxus mairei. Saripikan'i Sanjib Chaudhary. Nahazoana alàlana.
Atahorana ho lany tamingana ny Taxus mairei (antsoina hoe maitsoririnina amin'ity lahatsortra ity ihany) any Nepal raha hazo matotra latsaky ny 500 sisa tavela any anaty ala. Raha efa nampiasaina tany Nepal ho fanafody nentim-paharazana nandritra ny taona maro ny maitsoririnina, dia iray amin'ireo kasinga hiadiana amin'ny homamiadana ny Taxol amin'ny T. mairei. Araka ny tombatombana, ny ravin'ny T. mairei iray taonina dia afaka mamokatra 10-DAB-III 550 grama eo ho eo izay ampiasaina ho akora simika mpanelanelana amin'ny fanamboarana paclitaxel (Taxol), fanafody hiadiana amin'ny homamiadana.
Niteraka fihariana fitangoana ravina ity hazo manana ny lanjany lehibe ara-barotra ity; any anaty alan'ny faritry ny distrika miisa telo any Nepal ihany anefa no ahitana ny T. mairei, ary koa satria mihena ny isan'izy ireo dia tena zava-dehibe kokoa ny drafitra fandraisana andraikitra sy maharitra amin'ny fiarovana azy ireo.
Maitsoririnina hiadiana amin'ny homamiadana
Iray amin'ireo fanafody mahomby indrindra sady be mpampiasa tao anatin'ny 50 taona lasa ny Paclitaxel, amidy amin'ny alàlan'ny marika Taxol. Tao anatin'ny hoditry ny Taxus brevifolia (maitsoririnina any Pasifika) no nahitana voalohany ity fanafody hiadiana amin'ny homamiadana ity. Fantatra amin'ny famokarany Taxol ny karazana Taxus rehetra. Misy karazana maitsoririnina roa hafa koa ankoatra ny T. mairei hita any Nepal, antsoina hoe T. wallichiana sy T. contarta ireo.
Ankoatra ny distrikan'i Sindhuli, Kavreplanchok ary Makwanpur any Nepal, hita any Shina, Vietnam, Indonezia, Myanmar ary Meghalaya any India ihany koa ny T. mairei. Niresaka bebe kokoa momba ny T. mairei any anaty ala i Paudel tamin'ny antsafa nifanaovana tamin'i Kumar Paudel, mpiara-manorina ny Greenhood Nepal:
Latsaky ny 500 ny hazo T. mairei lehibe ( mihoatra ny 30 sm ny savaivony). Raha ampidirina ny zanany (latsaky ny 10 sm dhp) sy ny tsatokazo lehibe (10-30 sm dbh) dia mitotaly manodidina ny 2.000 ny isany any Nepal.
Nahafahana nanombatombana ny isan'ny T. mairei tany anaty ala sy nanomezana torolàlana momba ny fitangosana maharitra ho fanampiana ireo mpitango ny fanadihadiana notarihan'i Kumar Paudel sy Reshu Bashyal avy any Greenhood Nepal, izay nahazo famatsiam-bola avy amin'ny Conservation Leadership Programme sy ny Kate Stokes Memorial Award.
Fantatrao ve fa mamokatra vokatra simika ampiasaina hitsaboana ny homamiadana ny maitsoririnina? Miara-miasa amiko ny @bashyalreshu sy ny @kmrpaudel ary ny @verissimodiogo amin'ny alàlan'ny @CLPawards amin'ny fijerena ny fiantraikan'io varotra io any Nepal
Araka ny fanadihadiana, manondrana 10-DAB-III milanja 25 kilao isan-taona eo ho eo i Nepal izay mitaky ravina milanja 45.454 kilao eo ho eo. Manangona ny ravina ny olona eo an-toerana, manamaina ary mivarotra azy ireo any amin'ny mpivarotra zana-kazo na ny mpandraharaha ao an-toerana amin'ny vidiny NPR 50 – 240 isaky ny kilao (1 USD = NPR 117). Niakatra be izany raha oharina tamin'ny tamin'ny fiotazana ravina tamin'ny taona 2002 izay NPR 10 – 30.
Koa satria tena ilaina ny maitsoririnina dia nahitana fitomboana betsaka ny fihariana tamin'ny fambolena zana-kazo ary nitombo ny fangatahana zana-kazo tao amin'ny firenena. Matetika ireo mpamboly zana-kazo no manomana ireo zana-kazo amin'ny alàlan'ny fahaizana manapaka izany manokana. Lasa mitovy karazana avokoa anefa ireo zana-kazo rehetra amin'ity fomba ity fambolena hazo an'arivony ity. Tokony ampifanakaikezina noho izany izy ireo amin'ny maha dioika ny maitsoririna (misy lahy sy vavy avy izy ireo) mba hiterahan'izy ireo. Noho izany, ilaina ny mamboly ilay hazo any amin'ny mpamboly zana-kazo amin'ny fomba siantifika ary mamboly azy ireo any amin'ny toerana voajanahary misy azy mba hamelomana azy ireo.
Atahorana ho lany tamingana ny maitsoririnina
Nanaovana zavatra maro tamin'ireo taranaka nifandimby tany Nepal ny maitsoririnina. Nampiasaina ho lafiky ny biby fiompy sy natao fanatitra ho an'andriamanitra ny sampany sy ny raviny. Nampiasaina tamin'ny fanorena-trano sy ny fanaovana fanaka sy fitaovam-pambolena kosa ny vatany. Nampiasain'ny vahoaka tompotany ihany koa ny maitsoririnina ho fanafody nentim-paharazana rehefa amin'ny fanaviana, kohaka, sohika, ary tsy fandevonan-kanina.
Saingy, nampiasa ny traikefany manokana ny vondrom-piarahamonina ao an-toerana noho ny tsy fisian'ny torolàlana sy ny fomba manokana amin'ny fanangonana ny ravina maitsoririnina. Matetika no mihanjaka tanteraka ny hazo ary maro ihany koa fahiny ny hazo tapaka noho ny habetsahan'ny olona mitady azy.
Ankoatra izay, hita any amin'ny haabon-tany ambany kokoa ny karazana T. mairei fa tsy tahaka ireo karazana Taxus hafa ary miatrika fanosihosena izy ireo noho ny toeram-ponenan'olombelona ary miatrika olana hafa ihany koa toa ny famotehana ny fonenany, ny fihinanam-bilona, ny doro ala ary ny fitrandrahana tsy ara-dalàna.
Mihevitra aho fa zava-dehibe ho anay ity hirika ity sy ho an'ireo vondrom-piarahamonina mpioty ravina mampiasa ny torolàlana fiotazana mba hahazoana miantoka ny hoavin'ny Taxus mairei sady mampianatra azy ireo ihany koa. Misaotra an'i Kate Stokes, loka fahatsiarovana.
Dingana iray miabo mankany amin'ny fiarovana ny isan'ny T. mairei any an'ala ny fitomboan'ny fambolena an'ireto hazo hiadiana amin'ny homamiadana ireto raha voarindra tsara.